Antamedia Hotspot (၂)နေရာမှာ account database တစ်ခုတည်း ချိတ်ပြီးသုံးချင်ပါတယ်။ — MYSTERY ZILLION
Antamedia Hotspot (၂)နေရာမှာ account database တစ်ခုတည်း ချိတ်ပြီးသုံးချင်ပါတယ်။
January 2014 in Networking
Sky Net MPS (2) စုံ သုံးနေတယ်ဗျာ။ (၂)နေရာစလုံးမှာ Antamedia Hotspot Ver 3.5 နဲ့ Wi-Fi ပေးထားတယ်ဗျာ။ User Account တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ Control လုပ်ချင်လို့ Account Database ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ။ Local LAN ပေါ်မှာတော့ ရတယ်ဗျ။ SKY NET MPS (2)လုံးကို ချိတ်တာ မရဘူးဗျာ။ နားလည်တဲ့ အကိုတို့ ကူညီပါ။
January 2014 Administrators
Let me know about Antamedia. Do you need to configure MySQL Server Address, Username and Password in Antamedia?
January 2014 Registered Users
Antamedia Hotspot ဟာ User Account ကို DB-server ဆိုတဲ့ဟာကို Run ပါတယ်။ DB-server မှာ user name နဲ့ Password ရှိပါတယ်။ အဲဒီ DBserver ရဲ့ Lan IP နဲ့ Port 12010 ကို Antamedia က ချိတ်ယူတာပါ။ Local LAN အတွင်းမှာဆိုရင် DB-server ကိုချိတ်သုံးလို့ရပါတယ်။ SKY NET MPS 172.26.x.x.x (၂)လုံးကို ချိတ်ချင်တာပါ။ TP-link router က Port Forwarding စမ်းကြည့်တယ် ။ setting မှားတာလားမသိဘူး။ မရပါ အကိုရေ
Port Forward လုပ်ထားတာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ Database Server ရဲ့ Local IP နဲ့ Port ကို Connect လုပ်လဲ အဲဒီဘက်က 172.26.x.x ရဲ့ Port X ရယ်ကို Connect လုပ်ရမယ်မဟုတ်လား နောက်ပြီးတော့ အဲဒီ 172.26.x.x Router မှာမှ Port X ကိုဝင်လာရင် Database Server ရဲ့ Local IP & Port 12010 ကို Forward လုပ်ရမယ်။ Port Forward မှန်မမှန်ကို အသေချာပြန်ကြည့်ပါ။
172.26.x.x ကနေ 172.26.x.y ထဲက Local IP ကို တိုက်ရိုက်မှ Connect လုပ်လို့မှမရတာ လုပ်လို့ရဖို့ဆိုရင် အဲဒီ ၂ ခုက VPN နဲ့ဆက်နေမှရမှာ အဲဒါက Port Forward မဟုတ်ဘူးလေ။
Thanked by2minlwin saturngod
If you use open source captive portal (Cova) and AAA Server (Dalo Radius), you can do like this design. You can sync your AAA servers over Internet.
But Antamedia dont support like that features.
Anyways, you are welcome, and call me if you really intrested.
Thanked by 1 minlwin